Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kubvumbi 30, 2020
Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave makumi mana, sekuziviswa kwazvakaitwa nehurumende nezuro manheru, uye vanhu vafa nechirwere ichi, vachiri vana.
Kanzuru yeguta reGweru inoti haikwanisi kudzikisa mitero yayakakwidza nepamusana pekuti makanzura haakwanise kusangana pari zvino nekuda kwechirwere checoronavirus. Asi vagari vanoti uku kuvanda nemunwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vochema zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kidzero dzevanhu nemapurisa nemasoja munguva ye National Lockdown.
Vakoti vanoshandira kanzuru yeguta reHarare voita basa ravo zvishoma nezvishoma vachinyunyuta nenyaya yekuti havasi kupihwa mari ye risk allowance panguva iyo vari kushanda vachirwisa chirwere cheCovid-19.
Hurumende yeBritain inozivisa kuti ichabhadhara mari inoita zviuru makumi matanhatu zvemapaunzi kumhuri dzavanamukoti nevamwe vari muboka rezvehutano vanoshaya vari pamabasa zvichikonzerwa neCovid-19, gurukota rezvehutano, VaMatt Hancock, vachiti hurumende yavo ine chikwereti chikuru kuvanhu ava nekuzvipira kwavo kushanda munguva yakaoma kudai.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeCoronavirus.